Raha manam-pinoana ianareo...
Sabotsy 08 aogositra 2020 — Herinandro faha-18 mandavantaona — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Matio 17, 14-19 — Alao tampina ny masoko, ry Tompo, hibanjinako ny zava-mahagaga amin'ny lalànao.
Masindahy Dominique de Guzman (Kintan'ny finoana) 08/08/2020 06:30
Raha manam-pinoana ianareo... (Tenin'ny Tompo) 08/08/2020 04:00
Masindahy Gaëtan de Thiène (Kintan'ny finoana) 07/08/2020 06:30
Inona no homen'ny olona... (Tenin'ny Tompo) 07/08/2020 04:00
Ny niovan'ny Tompo tarehy (Kintan'ny finoana) 06/08/2020 06:30
Ny tavany namirapiratra... (Tenin'ny Tompo) 06/08/2020 04:00
Masindahy Abel de Reims (Kintan'ny finoana) 05/08/2020 06:30
Ravehivavy, lehibe ny finoanao (Tenin'ny Tompo) 05/08/2020 04:00
Masindahy Jean-Marie Vianney (Kintan'ny finoana) 04/08/2020 06:30
Ny voly tsy ambolen'ny Raiko dia hongotana (Tenin'ny Tompo) 04/08/2020 04:00
Fiketrahan'i Masindahy Pierre
Naseho ny : 22 febroary 2020
22 febroary — Raha ny tetiandron'ny Fiangonana Katôlika Romana no jerentsika dia intelo ny Fiangonana no manoka andro hatsiarovana an'i Masindahy Pierre ao anatin'ny taona. Ao ny 29 jona hankalazana ny fetin'i Masindahy Pierre sy Paul miaraka. Eo ihany koa ny 18 novambra fankalazana ny fitokanana ny Bazilikan'i Masindahy Pierre. Ary ity ankalazaina androany ity dia ny Fiketrahan'i Masindahy Pierre.
fiketrahan'i masindahy piera
FVTM: 15 taona nampandrosoana ny eny ambanivohitra
Nosoratan'i Rakotoarison James Daniel
Lohahevitra : Hirika
Naseho ny : 21 febroary 2020
Nampivoatra ny velon-tenan’ireo vehivavy mpikambana ao aminy ny sehatr’asan’ny Federasionan’ny Vehivavy Tantsaha eto Madagasikara na ny FVTM. Federasiona 15 taona mahery nijoroany ara-panjakana. Nikatsaka hatrany ny fomba hampandrosoana ny vehivavy tantsaha amin’ny lafiny maro tamin’ireo faritra 16 misy azy eto amin’ny Nosy.
Masindahy Pierre Damien
21 febroary — I Masindahy Pierre Damien dia teraka tao Ravenne tamin'ny taona 1007, izy no farany indrindra amin'ireo zanaky ny ray aman-dreniny. Fianakaviana sahirana sy mahantra no nipoirany.
Masimbavy Aimée d'Assise
Naseho ny : 20 febroary 2020
20 février — I Masimbavy Aimée dia avy amin'ny fianakaviana kristianina malaza tao Assise. I Masimbavy Claire, ilay nanara-dia an'i Masindahy François d'Assise no nenitoany ary i Frère Rufin no dadatoany.
Pejy 37 amin'ny 76